မဟာတနျးကြောငျးသူလေး အသုဘ မီးသွင်ျဂိုလျခါနီး မိခငျမှနောကျဆုံးအနနေဲ့ နမျးလိုကျတဲ့အခြိနျ ဒီဖွဈရပျမြိုး မကွုံရလအေောငျ – Shwe Yaung Media
မဟာတနျးကြောငျးသူလေး အသုဘ မီးသွင်ျဂိုလျခါနီး မိခငျမှနောကျဆုံးအနနေဲ့ နမျးလိုကျတဲ့အခြိနျ ဒီဖွဈရပျမြိုး မကွုံရလအေောငျ
တိုးတကျ ခတျေမီ ခငျြတဲ့နရောမှာလိုသလိုဆှဲယူ ခတျေမီ နကွေပွီး ရှေးဟောငျး အယူသညျးမှုတှကေိုတော့မပဈပယျနိုငျကွသေးဘူး။ သရှောပွနျ လူတဈယောကျကို လူနရေပျကှကျထဲ ပွနျဝငျခှငျ့ မပွုနိုငျဘူးဆိုရငျ
အသုဘလိုကျပို့တဲ့ လူတှပေါ ရပျကှကျထဲ ပွနျမဝငျခိုငျးပါနဲ့။သူတို့တှလေညျး သင်ျခြိုငျးကုနျးကို ရောကျခဲ့ကွတာပဲလေ။လူကို လူလို့ပဲမွ ငျပွီး လူ အဖွဈ ပွနျအသိမှတျပွုပေးရမှာပေါ့။ ကံကောငျး လို့ မသပေဲ အသကျရှငျလကျြ ပွနျရရှိလိုကျတဲ့
လူတဈယောကျကို ဝမျးမွောကျဝမျးသာ ဘာလို့ မကွိုဆိုနိုငျကွတာလဲ။ဘာလို့မြား လူ့ အသိုငျးအဝိုငျး ကို ပွနျဝငျခှငျ့ မပွုခငျြရတာလဲ။ကဲ မလိုတဲ့ အယူအဆတှေ ပယျကွရအောငျဗြာ။ဒီဇငျဘာ ၁၉ ရကျ မှနျးလှဲ ၁၂ နာရီ၁၅ မိနဈခနျ့ မန်တလေး ကွာနီကနျ
သုဿနျမှာ ဖွဈပှါးခဲ့သညျ့ ကုနျထုတျ ဓါတုဗဒေ မဟာတနျးကြောငျးသူလေး အသုဘ မီးသွင်ျဂိုလျ ခါနီးအခြိနျတှငျမိခငျဖွဈသူမှ နောကျဆုံးအနနှေငျ့ နမျးလိုကျစဉျ နှလုံးခုနျသံကွားရ၍ ဆရာဝနျ ပငျ့ စမျးသပျရာ အသကျရှငျ နကွေောငျး သိရှိရပါတယျ။
မိခငျ ဖွဈသူမှာ ဝမျးသာလှနျး၍ ထ ကသျောလညျး ရပျကှကျလူထုက မွို့နာမှာ စိုးလို့ဟုဆိုကာ မွို့ထဲသို့ အ ဝငျမခံ၍ မိနျးကလေးခမြာ ကွူကွူပါအောငျ ငိုပါတော့တယျ။အခွား အသုဘတဈခုလာပို့သူ မန်တလေး သိနျးဇျော ကိုယျတိုငျ ဝငျခှငျ့ပွုရနျ ….တောငျးပနျပွောဆိုသျောလညျး မွို့လူထုက လကျမခံသဖွငျ့
မိဘမြားမှမွို့ပွငျတှငျ အိမျဆောကျ ပေး၍ နစေမေညျဟု သိရပါသညျ။ယနလေို့ခတျေတှငျ ရှေးရိုးအယူအဆမြားကွောငျ့မဟာတနျး ကြောငျးသူ တဈယောကျ လူထဲမတိုးတော့မ ညျ့အဖွဈမြိုးကား ထို မိနျးကလေး ဘဝ အတှကျ နဈနာလှနျးလှပါတယျ။
အဆိုပါ မိနျးကလေး အပွငျ နောကျနောငျ ၎င်းငျးကဲ့သို့သော ဖွဈရပျမြိုး ကိုယျတိုငျကွုံတှရေ့စဉျသျော လညျးကောငျး၊ကိုယျ့မိသားစု အသိုငျးအဝနျးမြားထံမှ ကွုံတှရေ့လြှငျသျော လညျးကောငျး ….
ရှေးရိုးစှဲ အယူအဆကွောငျ့ ထိခိုကျသူမြား မရှိရစစေရနျအတှကျ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့ အမြားပွညျသူမြားအပွငျ ဘာသာရေးဆိုငျရာအယူမြားဖွဈသညျ့အတှကျ ရဟနျးရှငျမြားလညျး ပါဝငျပွီး ဝိုငျးဝနျးအဖွရှော စဉျးစားကူညီကွပါရနျ တိုကျ တှနျးအပျပါတယျ ခငျဗြာ။
မှတျခကျြ။လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈ(၃၀) ဝနျးကငျြခနျ့ မှလညျး လူမြိုးခွားတဈဦးဖွဈသညျ့ အမြိုးသမီး တဈဦး ၎င်းငျးကဲ့သို့ ဖွဈစဉျ မြိုးကွုံတှခေဲ့ရသဖွငျ့သုသာနျ တှငျ ဈေးရောငျး ရငျး ဘဝကိုဖွတျသနျးနရေကွောငျး ကြှနျတျောသိမွငျခဲ့ ဖူး ပါတယျ။ရှေးအယူအဆမြားဖွဈ
ဖွဈသညျ့အပျေါ မညျသို့သောဆိုးကြိုးမြား ရှိနိုငျသဖွငျ့ ယခုကဲ့သို့ သတျမှတျထားေ ကွာငျးကိုလညျးမသိနားမလညျ သဖွငျ့ နားလညျ တတျကြှမျးသူမြား အနဖွေငျ့ ဗဟုသုတဝငှေပေးပါရနျနှငျ့ ယခုကဲသို့သော ဖွဈရပျမြိုး မကွုံရလအေောငျမညျကဲ့သို့ ဖွရှေငျးနိုငျမညျ စသဖွငျ့ ရှေးရိုးစှဲမြားကိုလညျး ပွနျလညျပွငျဆငျ သုံးသပျသငျ့ပါကွောငျး။
မဟာတန်းကျောင်းသူလေး အသုဘ မီးသြင်္ဂိုလ်ခါနီး မိခင်မှနောက်ဆုံးအနေနဲ့ နမ်းလိုက်တဲ့အချိန် ဒီဖြစ်ရပ်မျိုး မကြုံရလေအောင်
တိုးတက် ခေတ်မီ ချင်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုဆွဲယူ ခေတ်မီ နေကြပြီး ရှေးဟောင်း အယူသည်းမှုတွေကိုတော့မပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးဘူး။ သေရွာပြန် လူတစ်ယောက်ကို လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်
အသုဘလိုက်ပို့တဲ့ လူတွေပါ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်မဝင်ခိုင်းပါနဲ့။သူတို့တွေလည်း သင်္ချိုင်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေ။လူကို လူလို့ပဲမြ င်ပြီး လူ အဖြစ် ပြန်အသိမှတ်ပြုပေးရမှာပေါ့။ ကံကောင်း လို့ မသေပဲ အသက်ရှင်လျက် ပြန်ရရှိလိုက်တဲ့
လူတစ်ယောက်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဘာလို့ မကြိုဆိုနိုင်ကြတာလဲ။ဘာလို့များ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်း ကို ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုချင်ရတာလဲ။ကဲ မလိုတဲ့ အယူအဆတွေ ပယ်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ၁၅ မိနစ်ခန့် မန္တလေး ကြာနီကန်
သုဿန်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ကုန်ထုတ် ဓါတုဗေဒ မဟာတန်းကျောင်းသူလေး အသုဘ မီးသြင်္ဂိုလ် ခါနီးအချိန်တွင်မိခင်ဖြစ်သူမှ နောက်ဆုံးအနေနှင့် နမ်းလိုက်စဉ် နှလုံးခုန်သံကြားရ၍ ဆရာဝန် ပင့် စမ်းသပ်ရာ အသက်ရှင် နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မိခင် ဖြစ်သူမှာ ဝမ်းသာလွန်း၍ ထ ကသော်လည်း ရပ်ကွက်လူထုက မြို့နာမှာ စိုးလို့ဟုဆိုကာ မြို့ထဲသို့ အ ဝင်မခံ၍ မိန်းကလေးခမျာ ကြူကြူပါအောင် ငိုပါတော့တယ်။အခြား အသုဘတစ်ခုလာပို့သူ မန္တလေး သိန်းဇော် ကိုယ်တိုင် ဝင်ခွင့်ပြုရန် ….တောင်းပန်ပြောဆိုသော်လည်း မြို့လူထုက လက်မခံသဖြင့်
မိဘများမှမြို့ပြင်တွင် အိမ်ဆောက် ပေး၍ နေစေမည်ဟု သိရပါသည်။ယနေ့လိုခေတ်တွင် ရှေးရိုးအယူအဆများကြောင့်မဟာတန်း ကျောင်းသူ တစ်ယောက် လူထဲမတိုးတော့မ ည့်အဖြစ်မျိုးကား ထို မိန်းကလေး ဘဝ အတွက် နစ်နာလွန်းလှပါတယ်။
အဆိုပါ မိန်းကလေး အပြင် နောက်နောင် ၎င်းကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုး ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရစဉ်သော် လည်းကောင်း၊ကိုယ့်မိသားစု အသိုင်းအဝန်းများထံမှ ကြုံတွေ့ရလျှင်သော် လည်းကောင်း ….
ရှေးရိုးစွဲ အယူအဆကြောင့် ထိခိုက်သူများ မရှိရစေစရန်အတွက် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အများပြည်သူများအပြင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူများဖြစ်သည့်အတွက် ရဟန်းရှင်များလည်း ပါဝင်ပြီး ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာ စဉ်းစားကူညီကြပါရန် တိုက် တွန်းအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မှတ်ချက်။လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်(၃၀) ဝန်းကျင်ခန့် မှလည်း လူမျိုးခြားတစ်ဦးဖြစ်သည့် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ၎င်းကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ် မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရသဖြင့်သုသာန် တွင် ဈေးရောင်း ရင်း ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရကြောင်း ကျွန်တော်သိမြင်ခဲ့ ဖူး ပါတယ်။ရှေးအယူအဆများဖြစ်
ဖြစ်သည့်အပေါ် မည်သို့သောဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားေ ကြာင်းကိုလည်းမသိနားမလည် သဖြင့် နားလည် တတ်ကျွမ်းသူများ အနေဖြင့် ဗဟုသုတဝေငှပေးပါရန်နှင့် ယခုကဲသို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုး မကြုံရလေအောင်မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းနိုင်မည် စသဖြင့် ရှေးရိုးစွဲများကိုလည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင် သုံးသပ်သင့်ပါကြောင်း။
ယုံကွညျကိုးကှယျမှုကို အကွောငျးပွုပွီး ကြိုကျထီးရိုးဘုရားကို ပွစားနကွေသူမြား